Ividiyo Yemvubu: Khulisa Izilinganiso Zempendulo Yokuthengisa Ngokuthengiswa Kwevidiyo | Martech Zone
Ibhokisi lami lokungenayo lingcolile, ngizolivuma ngokuphelele. Nginemithetho namafolda ahlakaniphile agxile kumakhasimende ami futhi cishe yonke enye into iwela eceleni ngaphandle kudonsa ukunaka kwami. Ezinye izindawo zokuthengisa ezigqamayo zingama-imeyili evidiyo aqondene nawe athunyelwe kimi. Ukubona othile ekhuluma nami mathupha, ebuka ubuntu bakhe, futhi ngokushesha engichazela ithuba lami kuyahileleka… futhi ngiqinisekile ukuthi ngiphendula kaningi.
Akumina ngedwa… ukuthengiswa kwamavidiyo kuyindlela yokukhula ephezulu yokuthi amaqembu athengisayo aphumelele ngamathemba lapho izinkampani eziningi zibona ngaphezu kuka-300% ezilinganisweni zokuphendula.
I-Hippo Video Sales Engagement
I-Hippo Video inikeza inkundla elula yethimba lakho labadayisi ukwakha ukwethembana, ukuhlinzeka ngenani nokukhulisa ubudlelwano namathemba ngosizo lwamavidiyo WANGEMPELA nawokwenziwa abantu. Nakuba isixhumi esibonakalayo somsebenzisi silula... sihlanganiswe khona kanye kubha yakho yomsebenzi, umahluko wangempela we Ividiyo Yemvubu iqoqo labo lokuhlanganisa lokulandelela umsebenzi wakho wokuthengisa cishe kuwo wonke ama-imeyili, ukuphathwa kobudlelwane bekhasimende (CRM), kanye nezinkundla zokuvumela ukuthengisa.
Ividiyo Yemvubu inika amandla ithimba lakho labadayisi ukuthi lirekhode ividiyo ngokuchofoza okukodwa, lihlanganise futhi labelane ngamavidiyo ngaphandle komthungo ngaphandle kokushintsha izinkundla, bese lilandelela amanani ezimpendulo ukuze kuthuthukiswe intuthuko futhi kuqhubekisele phambili ukuthengisa okwengeziwe.
Izici ze-Hippo Video Platform
Ukuhlelwa kwevidiyo - Nikeza ividiyo yakho ukugeleza okuhle kakhulu obukuhlosile ngenketho yokunquma ukumisa isikhashana, ukunqampuna izinto ezingafuneki, ukufiphalisa okungeziwe ukuze ugcine ukugxilile, ukunwebeka usayizi we-aspect ratio yakho, futhi uyiqhakambise ngokungeza ama-emojis noma ama-callout.
Ingemuva elibonakalayo - Gcwalisa ingemuva levidiyo yakho ngendlela oyithandayo ngobuchwepheshe babo bangemuva obubonakalayo.
Izimbondela zevidiyo - Thola umlayezo wakho ngempumelelo ngokwengeza umbhalo nezithombe kuvidiyo yakho.
I-GIF ishumeka – Veza kubhokisi lokungenayo lomamukeli wakho ngezithonjana ze-GIF ezipopayo ezidlalayo lapho zivula i-imeyili yakho.
Thumela - Thumela amavidiyo ku-YouTube, G Suite, nakwezinye izinkundla ngokuqondile ngaphandle kokuhlupheka.
Ukubizelwa Esenzweni - faka izixhumanisi eziqondene nawe ukuze ubhukhe umhlangano, noma wengeze izinkinobho ze-Call-To-Action ezenziwe ngokwezifiso ukuze uhlele idemo noma ungene ocingweni.
Amakhasi Okuthengisa Enziwe Angokwezifiso - Shayela imikhondo isuka kuvidiyo eyodwa uye kulabhulali yamanye amavidiyo angasiza ukuthuthukisa ucwaningo lwabo nohambo lwamakhasimende.
Ividiyo ye-Teleprompter - Akuwona wonke umuntu ongakhuluma kahle ngaphandle kwecebo… I-Hippo Video ine-teleprompter eyakhelwe ngaphakathi ukuze ikusize uhambe phakathi kwamaphuzu akho abalulekile noma iphimbo elinemininingwane.
I-Prospect Tracking & Analytics - Bheka ukusebenza kwevidiyo yakho, isilinganiso sokubuka, inani eliphelele lokudlalwa, ukwabelana, izibalo zabantu, ababukeli abahlukile, kanye nomsebenzi ovela kumavidiyo akho.
Ukuhlanganiswa - Hlanganisa ne Gmail, Outlook, Salesforce, Hubspot, Outreach, SalesLoft, LinkedIn Sales Navigator, Pipedrive, I-ActiveCampaign, Slack, Zoom, Zapier, namanye amathuluzi ukuze umsebenzi wakho nempendulo ibhalwe ngokugcwele futhi ilandelelwe.
Ngaphandle kweplathifomu, ukubhalisa kwakho ku Ividiyo Yemvubu kufaka phakathi ukuqeqeshwa komhlaba wangempela namasu avela ku-Jeffrey Gitomer.
Zama Ividiyo Yemvubu Mahhala
Ukudalula: Ngiyilungu le-Hippo Video futhi ngisebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo kulesi sihloko.
Tags: I-ActiveCampaigngif animatedCRMimeyiliFreshdeskisevisi entshaividiyo yemvubuindawointercomJiraitilogo lokuthengisa elixhumenei-mailchimpI-Pipedriveama-prospect analyticsukulandelela amathembaUkunika Amandla Ukuthengisaamakhasi okuthengisasalesforceUkuthengiswaLofti-imeyili yevidiyoukusakazwa kwevidiyoividiyo imbondelaukubuka ividiyoamakholi wevidiyoukuqeqeshwa kokuthengiswa kwevidiyoi-teleprompter yevidiyoWordPressindawo yokusebenzelayoutubezapperzendeskzohodesk
I-Telbee: Thwebula Imilayezo Yezwi Evela Kubalaleli Bakho Be-Podcast